आमाको दूध बच्चाको लागि सबैभन्दा राम्रो उपहार हो
सोमबार, असोज ४, २०७८ १०:५०:०२ युनिकोड पुरानो वेबसाइट
मंगलबार, साउन २६, २०७८ खोजतलास
२९ औं विश्व स्तनपान सप्ताह २०२१ ‘हामी सबैको साझा जिम्मेवारी, स्तनपान संरक्षण हुन्छ प्रभावकारी’ भन्ने मूल नारासहित सुमेरु सीटी अस्पतालमा अगस्ट १ देखि ७ तारिखसम्म विभिन्न जनचेतनामूलक कार्यक्रम गरी मनाइयो । स्तनपान सप्ताहक समापन कार्यक्रममा स्तनपानको महत्व र आवश्यकता बारे प्रस्ट पार्न अस्पतालमा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीहरुबाट विभिन्न जनचेतनामूलक कार्यक्रमको आयोजना गरी कर्मचारी तथा नवजात शिशुका आमाका साथै बरिष्ठ डाक्टरको उपस्थितिमा कार्यक्रम समापन गरिएको थियो । सो कार्यक्रमकै विषय बस्तुमा रही सुमेरु सीटी अस्पतालका वरिष्ठ बाल रोग विशेषज्ञ डाक्टर कविना क्यालसँग खोजतलासले गरेको संक्षिप्त कुराकानी ः
० स्तनपान गराउने सही समय कहिले हो ?
सबै आमा राम्रोसँग आफ्नो बच्चा जन्माएपछि बच्चालाई स्तनपान गराउनको लागि तयार हुनुपर्छ । सामान्य डेलीवरी भएको आधा घण्टा र सिजेरियन सेक्शनको ३–४ घन्टा भित्र बच्चालाई स्तनपान गराउनुपर्छ । मह पानी, अंगूर पानी, चिनी पानी वा कुनै अन्य तरलसँग प्रिलेक्टीयलफीड नवजात शिशुलाई दिनु हुँदैन ।
० स्तनपान सुरु कसरी गर्न सकिन्छ र स्तनपानको उचित तरीका के हो ?
सबै आमा राम्रोसँग तयार हुनुपर्छ, प्रोत्साहित र जन्मपछि आफ्नो बच्चालाई स्तनपान गराउनको लागी शिक्षित हुनुपर्छ, आमाको स्तन र निप्पलसँग सम्बन्धित कुनै पनि समस्याको हल गर्नुपर्छ र आमा भावनात्मक रूपमा समर्पित हुनुपर्छ । आमा खुसी हुनुपर्दछ र उचित पौष्टिक आहार लिनुपर्छ, आमाको पहिलो दुध (कोलोस्ट्रम– प्रोटीन र इम्युनोग्लोबुलिनमा धनी), भएकोले पहेंँलो दूध बच्चाको लागी धेरै महत्वपूर्ण छ त्यसैले यो फ्याँक्नु हुँदैन र बच्चालाई खुवाउनु पर्छ ।
बच्चा र आमालाई सँगै राखेर, एक अर्काको नजिक एउटै ओछ्यानमा राखेर, आमाको पेटमा शिशुलाई राख्दै उनको छातीको नजिक ल्याउनु पर्छ । यसले आमा र एक बच्चा बीचको सम्बन्धमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ । साथै, उचित स्तनपानमा पनि मद्दत गर्दछ । स्तनपान आमा र बच्चालाई आराम सित तापमान उपयुक्त कोठामा गराउनु पर्दछ ।
सम्भवतः आमाले बच्चालाई उसको पछाडि समर्थन गरी बसेको मुद्रामा स्तनपान गराउनुपर्छ । बच्चा अर्ध सिटिङ्ग स्थितिमा राखिएको बेलामा एक हात आमाको स्तनमा राखिएको हुन्छ जबकि अर्को हातले छातीको पछाडि समर्थन गर्दछ जसले गर्दा निपल सजिलै पहुँच योग्य हन्छ । नाकले सास फेर्न बाधा बिना शिशुको मुख निप्पल सम्लग्न हुनुपर्छ । यसरी गर्दा बच्चा र आमाको पोजिसन राम्रो हुन्छ ।
० कति पटक र कति समयसम्म बच्चालाई स्तनपान गराउनु पर्छ ?
स्तनपानको सम्बन्धमा कुनै समय र कडा नियम छैन । जब बच्चालाई भोक लाग्छ त्यस्तो अवस्थामा आमाले स्तनपान गराउन सक्छिन् । स्तनपान प्रत्येक दुई÷तिन घण्टाको फरकमा गराउन सकिन्छ । शिशुले प्रत्येक पटक स्तनपान गर्दा कम्तीमा एउटा स्तन खाली गर्नुपर्छ र यो लगभग १५–२० मिनेट प्रति फीडिङ्ग लिन सक्छ । धेरै जसो बच्चाहरु खाने बेलामा सुत्न थाल्छ । त्यसैले यो बेलामा उनीहरुको कानको पछाडि अथवा पैतालामा स्टीमुलेट गरेर उनीहरुलाई जगाउन आवश्यक हुन्छ ।
० आमाको दूध बच्चाको लागि पर्याप्त छ भनेर कसरी पत्ता लगाउने ?
आमाको दूध बच्चाको लागि जीवनको पहिलो ५–६ महिनासम्म पर्याप्त हुन्छ । आमाको दुध खाएको बच्चा स्वस्थ र खुशी हुन्छ । यस्तो अवस्थामा प्रति दिन बच्चाको २०—३० ग्राम वजन बढ्छ, बच्चाले लगभग ६ देखि ८ पटकसम्म दिनमा पिसाव फेर्छ, दिनमा एक देखि ६ पटकसम्म तरल दिसा गर्छ र स्तनपान पछि दुई तिन घन्टा मज्जाले सुताउनुपर्छ ।
० बच्चा रुनुको कारण आमाको दुध प्रयाप्त रुपमा नभएको हो कि भन्ने हामी ठान्छौं तर, प्रयाप्त रुपमा आमाको दुध खाँदा पनि बच्चा किन रुने गर्छन् ?
याद गर्नुहोस्, यो न केवल भोक हो, जुन तपाइँको बच्चालाई रुवाउने गर्दछ, यदि तपाइँ ठीक स्तनपान गराउनुहुन्छ त्यो अवस्थामा पनि बच्चा रोयो भने तपाइँको बच्चालाई अप्ठ्यारो गर्ने केहि अन्य कारण हुन सक्छ । त्यसैले कृपया याद गर्नुहोस् – यदि बच्चाको डायपर मलको कारण भिजेको छ वा पिसाबले । यदि बच्चाको कपडा धेरै कस्सिएको वा चिसो छ, अन्य बच्चाले तपाइँको बच्चालाई अनजानमा चलाइरहेको छ । कि बच्चा सुत्नको लागी हो वा यो अन्य रोगको कारण हो (जस्तै नाक टाल्लिएको, उल्टी, चिसो, ज्वरो आदि)। यदि तपाईंको कोठाको तापमान बच्चाको अनुकलता अनुसार ठिक छ छैन जाँच गर्नुहोस् । तपाइँको बच्चालाई तपाइँको न्यानोपनको आवश्यकता हुन सक्छ ।
० डकार के हो र किन यो स्तनपान पछि महत्वपूर्ण छ ?
बच्चालाई दुध खुवाउने÷चुसाउने बेलामा बच्चाले हावा पनि खाएको हुन्छ जसले गर्दा उनीहरुमा पेट ढाडिन्छ, जसले गर्दा बच्चाको पेटमा हावा भरिएको हुन्छ । त्यसैले यी सबैबाट बच्नको लागी आमाले आफ्नो बच्चालाई देब्रे काँधमा राखेर, टाउको आमाको देब्रे हातले समर्थन गरी र त्यसपछि दाहिने हातले नितम्बलाई समर्थन गरेर र दाहिने हातले बिस्तारै बच्चाको पछाडि हल्का थप्थपाउनु पर्छ । बिस्तारै हावा बच्चाको मुखबाट निस्कीन्छ र बच्चालाई सहज महसुस हुनेछ । यो प्रत्येक खाना पछि गरिनु पर्छ र एक बच्चा डकार गर्नको लागी १०–१५ मिनेट लाग्न सक्छ ।
० आमाको दुध बाहेक अन्य कुन खाना वा तरल पदार्थ बच्चालाई दिनुपर्छ ?
५÷६ महिनाको उमेरसम्म बच्चालाई आमाको दुध अति आवश्यक हुन्छ । त्यो समयसम्म बच्चालाई आमाको दुध बाहेक अन्य खानेकुराको आवश्यकता पर्दैन । जुन चार÷पाँच महिनाको अवधिमा आमाले बच्चालाई नियमित दुध खुवाउँदा बच्चाले आवश्यक पोषण प्राप्त गर्नुका साथै बच्चाको तिर्खा मेटाउनु, भोक मेट्नु, बच्चाको बृद्धि विकासको लागि अति नै राम्रो गर्दछ । यो समयमा बच्चाको सामान्य अवस्था रहेसम्म बच्चालाई आमाको दुध मात्रै खुवाउनुपर्छ ।
० कुन उमेरसम्म बच्चालाई स्तनपान गराउनु पर्छ ?
बच्चालाई जन्मेदेखि नै स्तनपान गराउन सुरु गर्नुपर्छ, ५ देखि ६ महिनाको उमेरसम्म आमाकै दुध मात्रै खुवाउनुपर्छ । पाँच महिनापछि अन्य तरल तथा ठोस पदार्थहरु आवश्यकता अनुसार मात्र खुवाउने गर्नुपर्छ । आमाको दुधले बच्चाको मस्तिष्क विकासको लागि हो भने गाई—भैंसीको दुध शरीर बृद्धिको लागि हो । त्यसैले दुई वर्षसम्म आमाले बच्चालाई दुध खुवाउनुपर्छ ।
० कामयावी महिलाले बच्चालाई कसरी स्तनपान गराउन सक्नुहुन्छ ?
कामयावी महिलाले आफू घरमा भएको अवस्थामा बच्चालाई स्तनपान गराउनुपर्छ भने अफिसको समयमा त्यस्ता आमाले दुधलाई एक सफा स्टील कन्टेनरमा राखी त्यसलाई फ्रिजमा २४ घण्टासम्मको लागि राख्न सक्नुहृुन्छ । त्यो दुधलाई सिधै नतताइकन चाहिने मात्र दुध एउटा स्टीलको सफा भाँडामा राखी तातोपानीको भाँडामा डुबाई मनतातो बनाएर बच्चालाई खुवाउन सकिन्छ ।
० हामीले बोतलबाट हाम्रो बच्चालाई दुध खुवाउन सक्छौं ?
बच्चालाई बोतलको माध्यमबाट दुध खुवाउनु राम्रो होइन, किनकी पखालाको रुपमा गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इन्फेक्सन हुने सम्भावना रहन्छ । बच्चालाई निप्पल भ्रमको विकास हुन सक्छ । बोतलको दुध चुसाई रहेको बच्चालाई आमाले उसलाई फेरि स्तनपान गरायो भने उसलाई बोतलको तुलनामा आमाको दुध चुस्न असहज हुने हुन्छ । मानव दूध अद्वितीय शिशुको आवश्यकताको लागी अनुकूलित छ । आमाको दुध आफ्को स्तनबाट खुवाउँदा राम्रो हुन्छ । यसले गर्दा आमा र बच्चा बिचको बोन्डीङ्ग पनि राम्रो हुन्छ ।
० आमाको दुध बाहेक बच्चालाई अतिरिक्त भिटामिन सप्लिमेन्ट दिन आवश्यक छ ?
बिल्कुल कुनै सामान्य अवधिमा स्वस्थ शिशुहरुको लागी आमाको दूध सबै आवश्यक पोषण, भिटामिन, प्रोटिन, एन्जाइम, इम्युनोग्लोबुलिन, ऐन्टिबडीहरु जुन बच्चाको बृद्धि विकासको लागी पुग्छ त्यस्तो अवस्थामा अन्य भिटामिन दिनु आवश्यक छैन । स्तनको दूध सबैभन्दा राम्रो उपहार हो, कुनै पनि आमा आफ्नो बच्चालाई राम्रो र स्वस्थ राख्नको लागी र यो अद्वितीय पोषण, प्रतिरक्षा र लाभदायक हुन्छ ।
प्रकाशित मिति: मंगलबार, साउन २६, २०७८, १२:१४:००